रामचन्द्र उप्रेती सफल हुने इच्छा कसलाई हुँदैन र ? तपाईलाई पनि त सफल हुने इच्छा छ, होइन र ? केमा सफल हुने भन्नुहोला । तपाई जेमा सफल हुन चाहनुहुन्छ त्यसैमा । बिद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदुर, पत्रकार, लेखक, खेलाडी, गृहिणी, वकिल, डाक्टर, राजनितिज्ञ, नेता, नीजि व्यवसायी आदि आदि । मानिसले आपूmले चाहेको काममा सफल हुदै जानु भनेको...
जमरा भन्ने बित्तिक्कै हामी दशैं अनि पहेँलो जमरा सम्झिईहाल्छौं । नेपाली हिन्दुहरुको दशैंमा जसरी जमराको प्रयोग गरिन्छ, जमरा नभई दशैं नै मनाइदैंन । जसरी जमरालाई दशैं पर्वको पर्यायका रुपमा लिइन्छ, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणमा पनि जमराको ठूलो रहेको पाइएको छ । जमराबाट बनेको जुस खाने हो भने मानिसलाई अद्भूत लाभ हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्...
मकवानपुर । हामीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ की कति समय सुत्नुपर्ला ? जसरी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि खानपान, व्यायाम आवश्यक पर्दछ त्यसरी नै निन्द्राको पनि उत्तिक्कै महत्व हुने गर्दछ । राम्रो स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि हामीलाई हामी आवश्यक मात्रामा सुत्नु पनि पर्दछ । दैनिक जीवन यापनकै सहजताको लागि पनि निन्द्रा धेरै उपयोगी हुन्छ । यदी शरिरको...
1) ‘रिस’को उल्टो ‘सरी’ पनि हुन्छ । कहिलेकाही उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ । 2) मेरो एउटा पनि सत्रु छैन, सत्रु देख्यो कि मैले सिध्याइहाल्छु.. … उसलाई साथी बनाएर । 3) शहर र गाउँमा दुई फरक छन । (i). शहरमा घरहरू नजिक नजिक हुन्छन तर मनहरू टाढा टाढा हुन्छन, गाउँमा घरहरू टाढा टाढा हुन्छन तर मनहरू नजिक नजिक हुन्छन । (ii). शहरमा घरहरू पक्का हुन्छन तर...
पानी स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने कुरा हामीलाई थाह नै छ । तर कतिवेला कति मात्रामा पानी पिउने भन्नेकुरा सबैलाई थाह नहुन सक्छ । चिकित्सकहरुले सामान्य त प्रत्येक दिन ठूलो गिलासको आठ गिलास पानी पिउन सल्लाह दिने गर्दछन् तर त्यो पानी कतिवेला पिउनु पर्छ भनेर बताएका हुँदैनन । तर हामीले केही विज्ञसंग यसबारेमा कुरा गरी पानी पिउने ठीक समयको...
अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्ने मान्यता भने हामीमाझ स्थापित छ । तर, अध्ययनहरुले भनेका छन् कि रातिमा भन्दा विहानको सेक्स उत्तम हुन्छ । कारण एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अनुशन्धानहरुले विहानमा सेक्स गर्ने विभिन्नकारणहरु पत्ता लगाएका छन्। साच्चै भन्ने हो भने सेक्स गर्ने कुनै निश्चित समय छैन न त कति पटक गर्ने भन्ने कुनै...
एजेन्सी: यौनमा आनन्द भएन भने त्यो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने शारीरिक क्रियाकलापमात्र हो । यौनमा पुरुष र महिला दुवैको उत्तिकै सहभागिता हुनुपर्छ । दुवैले यौन सम्पर्कका बेला यौन आनन्द प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । एकजनाले मात्र सन्तुष्ट हुनलाई सम्भोग भनिँदैन । सम्भोगको अर्थ भनेकै दुवैले समान रूपमा भोग्ने वा यौनको आनन्द पाउनु भन्ने हो । यौन...
अनुहारमा देखापर्ने दागले अनुहारको सुन्दरतामा ह्रास ल्याउँछ । प्राकृतिक रूपमा यस्ता दाग हटाउन यी उपाय उपयोगी हुन सक्छन्ः कागतीको रस दाग भएको ठाउँमा कागतीको रस लगाएर आधा घण्टापछि सफा पानीले सफा गरेमा दाग हराउँदै जान्छ । नतिजा देखापर्न दुई÷तीन महिनासम्म नियमित कागतीको रस लगाउने गर्नुपर्छ । स्ट्रबेरी पाकेको स्ट्रबेरीको पेस्ट बनाई...
हामी बोसो बढेकोमा धेरै चिन्ता गर्ने गर्दछौं । बोसो कम गर्न त्यस्ता खानेकुरा खानुपर्छ, जसले तपाईंको शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्व प्रदान गरोस्, तर थप बोसो नलगाओस् । यी हुन् त्यस्ता केही खाना : – बोक्रा नताछेको हाडेबदाम – फ्याट कम गरिएको दूध, दही, चिजलगायत दुग्ध परिकार – अण्डा – स्ट्रबेरी, ब्लुबेरीलगायत...